Kedu ihe bụ ogwe aka ịgba ịnyịnya ígwè oyi kacha mma? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ugbo ala igwe oyi - nkọwapụta zuru ezu
Ugbo ala igwe oyi - nkọwapụta zuru ezu
Kedu ihe bụ ogwe aka ịgba ịnyịnya ígwè oyi kacha mma?
(Air Rush) - Nnukwu ihe kpatara na ị ga-enweta aka na ụkwụ bụ oyi n'ihi na mgbasa gị adịghị mma, yabụ gbaa mbọ hụ na akpụkpọ ụkwụ gị tọpụ ma ọ bụghị akpachapụ anya ka ọbara si n'isi gị banye na mkpịsị aka gị na mkpịsị ụkwụ gị na-aga. You na-achọgharị mkpịsị ụkwụ gị enyi? - Ana m agbalị kwa.
Mechie oghere ndị dị ka nke a, m na-ekwu, ọ bụghị nke ahụ na-atọ ụtọ, mana ị nwekwara ike iwepụ ihe mkpuchi ahụ wee kpuchie windo ahụ naanị ya na ụzọ ndị ọzọ ma ị ga-enwe ezigbo ụkwụ na-ekpo ọkụ. Zuru oke maka oge oyi. Nri, ọ bụrụ na teepu m anọgide. (Mkpuchi agbasiri ike) (egwu rock) - E nwere ọtụtụ ụdị uwe dị iche iche dịka aka dị iche iche, mana ọ dị oke mkpa na ị nwere kit nke ga-arụ ọrụ n'ọnọdụ ị na-ezube ịga.
standover elu ụzọ bike
Ugbu a ebe a na Europe anyị nwere ike n'ozuzu na pụọ ​​na a mara mma oké ụzọ nke oyi uwe. N'ihi na oyi anaghị atụ oyi ebe a, ọkachasị UK. Na mkpokọta, ọnọdụ okpomọkụ anaghị agbanwe nke ahụ na ihe ọ bụla gi.Ma ọ bụrụ na ibi n'ebe ihu igwe dị njọ karị ma ọ bụ ebe ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwe karịa ụbọchị, ị nwere ike ịtụle ihe ọzọ a claw ma ọ bụ Inner akpụkpọ ụkwụ.
Yiri uwe na-adaba adaba n'okpuru mkpuchi oyi nke nwere ike iwepụ mgbe ọnọdụ okpomọkụ gbanwere ma ọ na-ekpo ọkụ n'ụbọchị ma ọ bụ ọ bụrụ na aka gị dị mmiri, dochie akpụkpọ ụkwụ dị n'ime (bass strums) dị n'etiti afọ - ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụ a mmiri na oyi na-atụ ụbọchị ebe a na UK na ọ bụrụ na ị chọrọ na-ata ahụhụ site na mmiri na oyi na-atụ aka mgbe a mbanye anataghị ikike ga-enyere gị aka n'ezie na ọ na-agụnye ụfọdụ latex saddlebag uwe mgbe na-akwadebe gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na-etinye ya na akpa azụ gị na mgbe mmiri na-ezo, ị na-enweta uwe aka mmiri, tinye ha na nke ahụ pụtara na uwe aka gị nwere ike ịmị mmiri, mana aka gị ga-anọgide na-akpọnwụ nwere ezigbo oyi na-atụ na knight Ọ bụrụ na ịchefu uwe aka gị, ị nwere ike mgbe niile na-aga a ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ mmanụ ụgbọala gaa tinye ha na, Bob bụ nwanne nna gị, e nwere ị nwere ya. Ọ dị mma, aka na-ekpo ọkụ ma na-akọrọ aka. (Obi ụtọ na egwu music) - Maka ugo - N'ebe ahụ n'etiti gị, ị nwere ike ịchọpụta na anaghị m etinye sọks ọkụ m taa, kama sọks oyi.
Ndị a nwere ihe ikuku na-egbochi mmiri na mmiri, ha bụkwa nhọrọ mbụ m, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta sọks oyi ma ọ bụ na ị na-agba ọsọ ma chọọ itinye sọks sọks, na-eme ka okpukpu abụọ dị iche iche bụ iji mee ka ị kpoo ọkụ. Maka na ị kpọchiri ikuku na-ekpo ọkụ n’etiti n’etiti onye ọ bụla. Naanị ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-eyi akwa ụkwụ n'ụkwụ gị bụ na ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ ụkwụ siri ike karị, ị nwere ike ịnwe nsogbu ịbanye ụkwụ gị. Ọ bara uru ịnwe akpụkpọ ụkwụ nke abụọ maka oge oyi, nke nwere ike ịbụ naanị ọkara nha buru ibu. (Orchestral Music Na-aga n'ihu) - Usoro GCN ọdịnala iji mee ka ụkwụ gị dị mma ma kpoo ọkụ site na iji ụfọdụ mpempe akwụkwọ aluminom.
Zuru okè maka ọnọdụ okpomọkụ ọ bụla belụsọ ma ọ dị oke oyi ịpụ. (chuckles) (eletriki guitar strummers) - Mgbe a na-achọ hacks iji nọrọ na-ekpo ọkụ ma na-akọrọ n'oge oyi, ụfọdụ n'ime ndị kachasị dị mfe bụ ndị kachasị dị irè, na n'ezie nke kachasị ọnụ. Enwere ike ịhọrọ ihe nkiri nri.
Enwere ike zụta ya ọnụ ahịa dị ala na ụlọ ahịa na-ere ahịa na mpaghara gị ma ọ dị mfe iji. Just na-agbatị ụkwụ gị niile na ihe dị mma maka ihe nkiri ịrapara bụ na ọ na-arapara n'ahụ ya ka ị ghara iji nke ukwuu. Naanị kpuchie ụkwụ gị na nkwonkwo ụkwụ gị mgbe ị na-eyi uwe elu ma belata oghere maka mkpịsị ụkwụ gị ma nwee ụkwụ na-eduzi osimiri, ihu igwe na-enweghị ihu igwe.
Kpachara anya, ụkwụ gị ga-agba ntakịrị, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ gaghị ajụ oyi. (Rock Rock) - Ọ bụ otu n'ime oge oyi nke oge oyi, na aka gị anaghị eme aghụghọ ahụ, na-eme ka aka gị dị ọkụ dịka ịchọrọ. Ehe, enwere m ezigbo aghụghọ nke uwe m nwere ike igbochi aka gị ịjụ oyi.
Ezubere nke a iji gwọọ akwara maka mgbu na ihe mgbu, mana ị nwere ike ịzụta ha n'ụlọ ahịa ọ bụla n'èzí ma ọ bụ na-ama ụlọikwuu na ha na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche ma na-adịgide ruo oge ole na ole ma nwee ike igbochi aka gị ka ha bụrụ mgbochi nke ice. Ihe ị ga - eme bụ dọka azụ gị, tee ya na aka gị, tinyeghachi ya na aka aka gị, na - ejide n'aka na ihe mkpuchi gị anaghị egbochi ọbara gị. Ya mere, debe ihe niile dị mma, ọbara na-ekpo ọkụ nke na-esi na isi gị ruo n'aka gị mgbe ahụ ị kwesịrị ịnwe mmetụ dị mma na-ekpo ọkụ na aka gị nke ga-eme ka ọ dị mma ma dị ọkụ ruo mgbe ị laghachiri n'ụlọ ma nọrọ n'akụkụ ọkụ. (na-eku ume nke ukwuu)
Oh, nke ahụ dị mma. Chei! (Rock Music) - Ọ bụrụ na oge oyi ndị a niile abụghị oge, mgbe ahụ naanị otu ihe fọdụrụ ime na nke ahụ bụ itinye ego na ngwa ngwa oyi a kwadebere maka ọnọdụ kachasị njọ m na-ekwu maka snow, ice, kpụ ọkụ n'ọnụ Rainfalls na sub-zero okpomọkụ. Dịka ọmụmaatụ, booties Fizik Artica R5 ndị ​​a, nke m ga-eyi naanị n'ọnọdụ kachasị njọ, ga-eme ka ụkwụ gị kpoo ma kpọnwụọ maka ọtụtụ ụgbọ ịnyịnya kachasị njọ, ihe na-egosipụta ihe ngosi, mkpọchi mkpuchi na ajị anụ n'ime nke pụtara na ha bụ nke gị Mee ka ụkwụ kporo ọkụ ma kpọọ nkụ n'ọnọdụ ọ bụla.
Naanị nsogbu bụ na ọ nwere ike ị gaghị achọ ịnya n'ọnọdụ ndị a. - Ugbu a, anyị nwere olile anya na ihe ndị a niile enyerela gị aka idobe ụkwụ na aka gị mma na ịnwụ ọkụ na njem ndị ahụ. - Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a, nye ya nnukwu isi mkpịsị aka wee mee ka anyị mata ma ọ bụrụ n’echiche na anyị tufuru ihe ọ bụla.
Tinye ya na nkwupụta ndị a n'okpuru ihe. - Ma maka ọtụtụ ndị ọzọ-esi pịa isiokwu ebe ahụ n'ihi na ọ na-ada mmiri ma na-ajụ oyi ma anyị ga-aga, nri? - Oh, anyị na-eme.- Ugh.
Cycgba ígwè n'oge oyiuwe aka adịghị mma. E nwere a ahia-apụ n'etiti dexterity naima. Onye bulie glove na pere mpemkpịsị akao nwere, nkeọkụọ ga-abụ. Mittens na-ekpo ọkụ ma na-eme ka ngbanwe na-esiri ike, yabụ 'lobster' gloves bụ nkwekọrịta bara uru karị na aigwe kwụ otu ebe.Mkpebi nke 6, 2017
mgbatị dị arọ
Have nwere mkpalata na ịchịkwa mkpa, yana ụfọdụ ị na-eri nri maka oyinwere ikewepụ ihe ahụ. ” Ọ nwere ike ịnwa ịnwa ịga obere oge oyiuwe akasite na ngalaba ulo ahia, ma aịgba ígwè- a kapịrị ọnụuwe akan'ikpeazụ na-ejere gị ozi karịa: A haziri ha kpọmkwemjigidenke giaka na-ekpo ọkụna ala mgbe ha '...Ọnwa Ise 4, 2016
Kedu ihe bụ ogwe aka oyi nke kachasị mma?
Iheuwe kachasị mmaiji mee ka aka gi to to aoyi
Agwa L.L. L.L. Bean Baxter State ParkaMittens.
Amazon. Carhartt Nwoke W.P. Waterproof gwara mmanụUwe aka.
Columbia. Columbia Thermarator Omni-Okpomọkụ FleeceUwe aka.
Amazon. Trendoux Kwesịrị SoftUwe oyi.
Inwe ezigbo mkpịsị akauwe akan'ihi na jụụ ụbọchị dị mkpa. N'etiti 8 na 12 Celsius (46-54 ° F)M na-ejia mfe arọ windproofuwe akanke ahụ nwere obere mkpuchi. Nke a na - enye ogo ogo, ma na - ezere iji ọsụsọ na - agba mmiri.Eprel 11, 2017
Mkpịsị aka Thinsulate dị ọkụ?
NA-EMENa-echekwa gịNa-ekpo ọkụ& NJỌ
Na-arụ ọrụ na snow, ice, ma ọ bụ mmiri ozuzo na mkpịsị aka gịuwe akamgbe mmiri na-ada, na-eme ka aka gị na-eche ọbụna oyi n'ihi nauwe akaadighi akpọnwu. Obi dị m ụtọ,Na-eche echichena-ejide yaimaọbụlagodi mgbe ọ na-ede mmiri ma ọ bụ na ọsụsọ.Bọchị 7, 2018
Oyiokpomọkụ, na nke onwe ha, anaghị emebi emebi aigwe kwụ otu ebe. Dịka ọmụmaatụ, na-eweta aigwe kwụ otu ebesite naoyin'èzí ikuku na ikuku dị ọkụ n'ime nwere ike ime ka mmiri kpuchie n'ime etiti ahụ, nke nwere ike iduga nchara.Abụọ 3, 2012
Ọ dị mma ịgba igwe kwụ otu ebe na ihu igwe oyi?
Onye nchịkwa Fred Matheny na-aza: Ọ bụrụ na ị na-eji ejiji n'ụzọ ziri ezi ma nwee ezigbo akụrụngwa, ị nwere ike ịga n'èzí n'agbanyeghịokpomọkụ. Ya mere, n'imeoyi na-atụ oyi, site na ugbu a ọzụzụ kachasị dị irè na-arụzu n'ime ụlọ na onye na-enye ọzụzụ ma ọ bụ na-anọ ọdụigwe kwụ otu ebe.
Kedu ihe m ga-eyi ịnyịnya ígwè na 55 degrees?
60Ogo(15.5C): Uwe elu na akwa uwe ogologo ma ọ bụ obere uwe ogologo. 50Ogo(10C): Tights ma ọ bụ ụkwụ na-ekpo ọkụ; akwa uwe ogologo-uwe na-enweghị aka ma ọ bụ mkpụmkpụ aka wick undershirt; ma ọ bụ uwe ogologo-uwe ogologo oge dị arọ nke nwere mkpịsị aka dị ogologo.
Kedu ihe mere ị ji achọ mkpa oyi maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Naanị ihe ọ na-ewe bụ ifufe oyi na ọbụna ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè 10 nke na-aga n'obodo nwere ike ime ka mkpọnwụ, mkpịsị aka uhie na ọtụtụ nhụjuanya. Ma ọ bụrụ na ị na-enweta otu ụzọ ịnyagharị ịgba ígwè, ị nwere ike ịbụ ezigbo uwe oyi kachasị mma maka ịgba ígwè, nri? Onye ọ bụla bụ onye gbara ígwè n'oge oyi na-ama mkpịsị aka mkpịsị aka etinye gị n'ụzọ ọsọ-ọsọ na njem nhụsianya.
Kedu ụdị uwe kacha mma maka ịnya igwe?
Yabụ otu ụzọ glove maka okpuru mmiri efu dị mkpa maka ịnya igwe na ọnọdụ a. Mgbe emechara ọtụtụ nyocha ma nwalee ụdị egwuregwu ndị a na-ewu ewu na-agba ịnyịnya, anyị ahọrọla Castelli Estremo Winter Cycling Gloves dị ka uwe kacha mma na-agba ịnyịnya ígwè maka oke okpomọkụ. Uwe aka aka raara nye ndị na-agba ịnyịnya na oke oyi.